Kulankii Aqalka Sare oo maanta u baaqday Kooram la’aan – Kalfadhi
Kulankii Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta u baaqday kooram la’aan, kaddib markii la waayay tirada dastuuriga ah ee uu ku furmi lahaa kulanka.
Ajandaha kulanka ayaa ahaa wax kabadelka xeer hoosaadka inta lagu guda jiro xaaladdaha COVID-19. Kulanka waxaa soo xaadiray xildhibaanno ka yar 10 mudane, halka mudanayaashii ka maqnaa fadhigii maanta ay doonayeen in kulanka ay uga qeyb-gallaan aalada fogaan araga ee ZOOM.
Senataradii soo xaadiray shirka ayaa diiday in kulanka looga qeyb-gallo aalada internetka, iyadoo xildhibaannadda ay ku doodeen in sharciyo iyo shaqooyin muhiim ah uu horyaallo golaha.
Senator Ayuub, ayaa sheegay in ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ay sugayaan in xeerarka lasoo gaba-gabeeyo inta aan la gaarin 27-ka bisha oo la sugayo in guddiga doorashooyinka ay horyimaddaan Baarlamaanka.
“Waxaa noo soo baxday in ay jirto in la carqaladeeynayo dhammeystirka xeerarkaasi, waxa aan fareynnaa guddoonka golaha in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qabtaan Kalfadhiga labada gole ee Baarlamaanka, iyadoo la rabo in sharciyada doorashooyinka la xiriiro lasoo gaba-gabeeyo”.
“Waxaan diidnay in aqalka sare koox yar ay u afduubnaadaan oo waraaqado is daba joog ah ay soo saaraan oo aan lala qabin. Warqadihii horay loo soo saaray lama qabnno, kuwa soo socdana haddii aan la waafajinin sharciga golaha aqalka sare waan diidi doonaan”, ayuu yiri Senatir Ayuub.
Dhinaca kale, Senator Fartuun Karaama ayaa sheegtay in sharci uu ku dhisanyahay Aqalka Sare, islamarkaana ay ku taaganyihiin sharcigaasi, hadda in la yiraahdo ZOOM ayaa lagu shirayaa wax aan aqbaleyno ma ahan, waxaa sidoo kale sheegtay in codka ummadda Soomaaliyeed ay ku shaqeynayaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa 6-ddii bishan June furay kalfadhiga 7-aad ee labada aqal ee Baarlamaanka Jamuuriyadda Faderaalka Soomaaliya, kaddib munaasabad ka dhacday xarunta villa Hargeysa ee Magaalada Mogadishu.